Ndingabhadhara mari pamutambo here? / Ndingaita cc iwe mari pachako nokuti ini handina kadhi rechikwereti.
Ndinotya sezviri ikozvino mabasa edu anongowanikwa kune chikwereti / debit kadi kutengesa uye Paypal. Izvi ndezvekuita kuti vatengi vedu vawane mutengi wavo kuchengetedza uyewo bhizinesi redu rinobvumirwa. Mune ramangwana tingakwanisa kugamuchira mari pamusana pekuendeswa kunyange zvakadaro. Kana iwe usina imwe yenzira dzokubhadhara sezvinotaurwa iwe unogona kuwana mumwe munhu kuti akubatsire nebhadharo yekutanga :)
Paypal zvinopa Mutengi kudzivirira uye anofarira vatengi nokupa gwara rakachengeteka uye maitiro akanaka ekubhadhara mari. Ichi ndicho chikonzero tinoshandisa kushandisa Paypal kuti tipedze kutengesa kwenyu pano pasina njodzi dzekadhi rechikwereti.
Kana uine kadhi yePaypal, chengetedza ne PayPal uye wega kuti upedze kutenga kwako maererano.
Ko kana ndisina PayPal Account ?!
Usanetseka sezvo iwe usingadi kuva neApaPal account yekubhadhara: iwe unogona kuisa data yako yekadhi yemari yekwereti pa PayPal uye kupedza kubhadhara kwako. Iwehaafaniri kubhadhara neApain account kwete.
1) IVA NOKWADZISA "KUDA NEZVIMWE KUNA KADHIDHI KADHI" KUSARUDZA KWAKASARUDZWA
Kana peji yako yePayPal ichiita sezvinotevera, ingofa pa "Chengeta neDebit kana Credit Card" kana "Tarisa semuenzi".
2. PINDA DHEDHI YAKADHI KUDZIDZA
Kero, email nefoni yefoni inogonawo kukumbirwa zvichienderana nenyika yako.
Kana wapedza, tora pa "Ongorora uye Rambai".
3. TARISAI "FUNGA ZVINO"
4. FUNGA "HERE, KUNYANYA" PAUNOBVUNZA KUTI UZIVE PAYPAL ACCOUNT. KUTONGA KWAKO KUNOPEDZA!
ITA! UNOGONA KUZVANIRA KUZVIRWA KWAKO KUKUNDA EMAIL KUFUNGA KUDZIDZA KWAKO! FUNGA KUBATSIRA :)
Sangano redu rekudzoka rinoguma Zuva 30 kubva pazuva raunowana chigadzirwa (IE ichinyora kubva kunzvimbo yako yepasipore). Kana mazuva e30 apfuura kubva ipapo, zvinosuruvarisa kuti hatigone kukupa kudzorera kana kutengesa.
Kana mhosva yacho iri patiri (yakavhengana, isina kukodzera pakusvika), isu tichazobhadhara kubhadhara kudzoka :)
Kuti uwane chikwereti chekudzoka, chinhu chako chinofanira kunge chisina kushandiswa uye mumamiriro akafanana kuti iwe wakagamuchira. Inofanirawo kunge iri mumapurasitiki epakutanga.Kuti upedze kudzoka kwako, tinoda risiti kana uchapupu hwekutenga.Ndapota usatumira kutora kwako kumashure. Ndapota cherechedzai kuti kudzorera mari yekubhadhara mari hakuzofukidzwi nesu. Isu tinokurudzira kuendesa tsamba yedu sangano rekutsigira kuti zvinyatsoongorora zvese.
Nokuda kweDare Rekubvunza, tapota tibvunzei isu kuburikidza nefomu rekubatanidza pane yedu yepaiti
Paunenge wazvitenga yako, iwe unenge uine maawa e-24 kuti usatse urongwa hwako. Tichapa zvikwereti zvakakwana kana iwe ukarasa urongwa hwako mukati maawa 24. Zvisinei kana maawa 24 apfuura kubva pawakagadzira urongwa, iwe unofanira kumirira kuti chikamu chako chiuye usati watodzorera kwatiri kwatiri.
Kana imwe nguva kudzoka kwako kugamuchirwa uye kuongororwa, tichakutumira email kuti tikuzivise kuti takagamuchira chinhu chako chakadzoka. Tichakuzivisa zvakare nezvekubvumirwa kana kurambwa kwekudzorera kwako.
Kana iwe uchibvumirwa, ipapo kubhadhara kwako kuchagadziriswa, uye chikwereti chinowanzoshandiswa kune kadhi rako rekwereti kana nzira yekubhadhara yakatanga, mukati mehuwandu hwemazuva zvichienderana nekutengesa mutengesi wako.
GADZIRA KANA MUMISIMBISO ANOKUDZIDZA
Zvadaro taura nebhangi rako. Iko kunowanzotora nguva yekugadzirisa kusati kwadzorerwazve.
Kana iwe waita izvi zvose uye iwe usati wambowana mari yako yokubhadharisa, tapota taura nesu kuburikidza nefomu rekubatana panzvimbo yedu yepaiti
Q-A kodeti yepositi inomiriro yekuisa mutemo asi ini handina imwe munyika yangu. Ndingakwanisa sei kuronga?
A- Kana kero yako isina ikhodi yeposi inopinda nomutsa "11111" uye isa zvaunofunga. Nenzira iyi, tichaziva kuti hapana chekisi yepositi inosanganisira
KUNOGONA KUTONGA KUDZIDZISA KUKUVA KARE?
Mirairo inowanzoenda kumazuva e5 kuti aite zvisati yatumirwa-kusina mavhiki ekupedzisira uye mazororo. Panguva dzezororo kushandura nguva dzinogona kutora kusvika kumazuva 14.
NGUVA YAKUVA YOKUTANGA?
Dare rekuAmerica richatumirwa kuburikidza ne USPS uye International Orders dzichaendeswa zvichienderana nekuzadzikiswa pakati pacho chigadzirwa chinobva.
Transit Times kusvika kuUnited States: 5 - 20 Mazuva emabhizimisi
Kufambisa nguva kuenda kune dzimwe nyika: 10 - 21 Mazuva emabhizimisi
Avhareji yenguva yekutenderera inogamuchirwa mumavhiki e3.
Kune mamiriro ezvinhu asingagoni kudzora (njodzi dzinongoitika dzoga, mazororo, mamiriro okunze, etc) izvo zvinogona kukonzera kutengesa kushambadzira. Kunyange zvazvo mapuraneti akawanda achisvika nenguva, pangava nemamiriro uye kunonoka kuti vatakuri vedu vanogona kuwana. Nokuda kwechikonzero ichi, hatirevi nguva chaiyo yekuendesa; Kubudiswa kwekutakura ibasa rekambani yekutumira.
NDICHAZVIRA KUTA NOMUNYORI WOKUTAURA?
Chimwe nechimwe chigadzirwa chinogona kutumirwa kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzinozadzika pasi rose sezvo boka redu rekutsvaga michina rinopedza nguva kuti rive nehutano asi zvigadzirwa zvinodhura. Kunyange zvazvo tisingakwanisi kugovera tsvakurudzo yezvigadzirwa zvako, kambani yedu inobhadhara zvizere pamapakiti uye chero zvinhu zvishayikwa zvichasunungurwa pasina iwe.
CHINHU CHINOKOSHA KUSHANDISWA KUTI KUDZIDZWA
Nhume yekuendesa kunonyanya kubva pane kuzadzika kwedu. Ichi ndechokuti chigadzirwa chedu chakasvibiswa kubva munyika dzakasiyana siyana kuti chive nechokwadi chokuti iwe unowana mutengo wakanakisisa waro. Courier maitirwo anosiyana kubva kune dzimwe nyika. Pasina bhizimisi rakasimbiswa nehutambisi webhuteri hatikwanisi kuwana mari inodhura nenzira iyo maererano nekukurumidzira kwatingazokanganisika kune dzimwe nzvimbo dzekutengesa dzakadai seAmazon nezvimwewo.
Zvisinei, isu ticharamba tichiratidza kuti iwe unogamuchira purogiramu yako uye unopa inshuwarisi pane yako purogiramu mukana wekushayikwa uye yakarasikirwa purogiramu
NDAKADZIDZA ZVINHU ZVAKAWANDA NEZVINHU, uye NDAKAGONA KUTI NDIYE IYE MUMWE MUMWE, NEI IYE IYE?
Tinoita zvose zvatinokwanisa kuderedza mari yekuguma kwako kuitira kuti urege kubhadhara mitero yakakwirira / mapurayamisi kuti uwane zvinhu zvako! Kana iwe ukaisa urongwa pamwe nesu nokuda kwezvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvichange zvichitumirwa mune imwe pfupa rimwe. Ndapota bvumirai nguva yokuti zvinhu zvenyu zvose zviuye.
NDINOFANIRA KUTI NDIDZIDZIDZE MAZVIMBO ANO KUTI KUDZIDZISWA NEZVO ZVOKUDZIDZWA PAKUTA ZVINHU ZVAKO?
Mitengo inoratidzwa pamubatsiro wako HERE Izvozvo zvakasiyana nezvakaraira asi tapota usazvidya mwoyo! Kazhinji izvo kuzadzikiswa kwatinoitwa nepakati kwaizoita ndechekucherechedza semitengo yakadzika zvikuru kana kuisa zvinhu sezvipo zvachose. Izvi ndezvokudzivirira mitero / tsika yekutengeserana inoshandiswa pakuguma kwako sekune dzimwe nyika izvi zvikwereti zvinowedzera zvinodhura.
NDAKADZIRA KUTAURA KUNA NDAKADZIRA KUFUNGA KWEMAIL EMAIL ... CHII CHINOGARA?
Ndapota funga kuti email yako yakarurama apo iwe unorayira. Mutsa chengetedza faira yako ye SPAM kuti uone kana email yako yekusimbisa yakatumirwa ikoko. Kana pachinenge pasina chinyorwa chekusimbisa, tapota tumira email yedu sangano rekutsigira kuburikidza nefomu rekubatana panzvimbo yedu yepaiti
CHII KANA NDICHAI NDI PASI PASI KUDZIDZA?
Chero ani zvake pamba anogona kugamuchira pepa panzvimbo yemutengi. Kazhinji mupostman achasiya chikwereti chekuunganidza kana pasina munhu pamba uye iwe ungatora chikamu chako pahofisi yako yepamunharaunda.
NDINODA KUCHINJA KUTONGA KWANGU / ADDRESS, NDINGAI?
Kunyangwe tichikukurudzira zvikuru kuti uongorore maitiro uye aderesi tisati taisa urongwa nesu, tinonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvinouya uye zvikanganiso zvinogona kuitwa. Tinoshandisa mirairo zuva rimwe chete ravanoiswa. Kana shanduko inoda kuiswa kurongeka yako tapota tibvunze isu kuburikidza nefomu rekubatana panzvimbo yedu yepaiti ASAP uye tichaita zvatinokwanisa kuti tigone kuchinja shanduko iyi, asi isu hatigone kuita zvipikirwa. Kana chinhu (s) chakatotumirwa kubva pakutsika kwatinoita isu hatigoni kuita shanduko kuhutano. Munyaya iyo, unogona kutumira chinhu chisina kukodzera kuenda kune imwe nzvimbo yeWeight Warehouse uye yakagamuchirwa tinogona kutumira chinhu chakarongedzerwa. Ndapota taurai nesu kuti tione kuti Ndeipi iri pedyo neChipatimendi chekuchengetedza nzvimbo kubva kunyika yako.
NDINE MUBVUNZO PAMUSORO WANGU KUNO KUNA KUTI UYE HERE HERE YAKAPINDURWA PERE, NDINOKWANIRA KUTI KUTI UYE KUTI UYE KUTI UYE KUTI UYE KUTI UYE WAKO?
Ndapota taura nesu uye tichafara kupindura chero ipi zvayo mibvunzo yako :)